I-Ivy League SAT Score Ukuthelekiswa kokungeniswa
Ukuthelekiswa kobucala-nge-Side ye-Ivy League SAT Admissions Data
Uya kufuna iimpawu ezifanelekileyo ze-SAT ukuze ungene kwisikolo se- Ivy League . Ngelixa ungadingi i-1600 epheleleyo kwiimvavanyo ukuba zivunywe, abafaki zicelo abaphumelelayo bathambekele ekubeni kwisibini esiphezulu sama-percentile. Ngaphandle kokuba uhlukile ngokweminye indlela, uya kufuna ukuba ne-1400 okanye ngaphezulu ukukhuphisana. Ngezantsi uzakufumana ukuthelekiswa koqhagamshelwano lwamanqaku kumaqela aphakathi kwama-50% abafundi ababhalisile.
Ukuba amanqaku akho angena ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujoliswe kwi-Ivy League. Gcina nje ukhumbule ukuba i-Ivy League ikhuphisana kakhulu kangangokuthi abafundi abaninzi abaphakathi kwimihlaba engezantsi abangenayo.
I-League League I-SAT Score Ukuthelekiswa (phakathi kwama-50%)
University of Brown 680 780 690 790 - - ubone igrafu
University of Columbia 700 790 710 800 - - ubone igrafu
University of Cornell 650 750 680 780 - - ubone igrafu
KwiKholeji yaseDartmouth 670 780 680 780 - - ubone igrafu
IYunivesithi yaseHarvard 710 800 720 800 - - ubone igrafu
IYunivesithi yasePrinceton 690 790 710 800 - - ubone igrafu
Yunivesithi yasePennsylvania 680 770 700 800 - - ubone igrafu
Yunivesithi yaseYale 710 800 710 800 - - ubone igrafu
Cofa kwi "jonga igrafu" ukudibanisa ukufumana umboniso wendawo apho amabakala akho kunye namanqaku okuhlolwa asemgangathweni awela ngayo ngokumalunga nabafundi abavunyelwe.
Iigrafu zityhila ukuba abafundi abaninzi abanamanani amanqaku aphezulu a-SAT abazange bangeniswe, kwaye abafundi abambalwa ababalaseleyo kwezinye iindlela bakwazi ukufumana amanqaku angaphantsi kwamanani. Ngenxa yobume bokuncintisana kwe-Ivy League, kufuneka uhlale ucinga ngezi zikolo ezisibhozo ukuba zifikelele kwizikolo , nokuba ngaba ujoliswe ekungeneni (Funda okunye: Amacala ama-6 apho iSikolweni esifanelekileyo sifumaneke khona ).
Zonke izikolo ze-Ivy League ziyakwamkelwa ngokupheleleyo , ngoko ke gcina amanqaku e-SAT ngendlela ecacileyo kwaye uqaphele ukuba ziyingxenye enye ye-equation equation. Ama-800s aphelileyo kwibhodi akaqinisekisi ukungena ukuba ezinye iindawo zesicelo sakho zibuthathaka. Amagosa avumelekileyo aya kufuna ukubona irekhodi eliqinileyo lemfundo , inqaku elinayo , imisebenzi enentsingiselo yexesha elichanekileyo kunye neencwadi ezilungileyo zinconywa . Ibali elibaluleke kakhulu okanye ibanga elilodwa elimangalisayo lingenza iinqununu zeSAT izikolo eziphantsi kwesiqhelo kwisikolo.
Kwakhona khumbula ukuba ukusetyenziswa kwangaphambili kwisikolo se-Ivy League sinokuphindwa kabini okanye kathathu amathuba okuvunyelwa (funda eli nqaku malunga nokusetyenziswa kwangaphambili ). Ukufaka isicelo ngeNkqubo yoLwangaphambili okanye iNkqubo yokuQala kweNkqubo yeNgcebiso enye yezona ndlela zibalaseleyo zokubonisa umdla wakho kwiyunivesiti, kwaye ezinye izikolo eziphezulu zizalisa u-40% okanye ngaphezulu kweklasi kunye nabafaki izicelo bokuqala.
Iinkcukacha ezivela kwiziko leSizwe leeNkcukacha zezeMfundo.
Ukufunwa kokomoya kukaGeorge Harrison kwisiHindu
Yintoni eyenza iLizwi liLizwi (kwaye lingabi nje isiqendu seZandi okanye iiNcwadi)?
Imibuzo yeBusiness Business
I-Adplain College Admissions